Western Digital na-atụghị anya ya kwalite draịvụ ike ya na Thunderbolt 3 na ihe ịtụnanya ndị ọzọ | Esi m mac
Western Digital na-atụghị anya ya wulite draịvụ ike ya na Thunderbolt 3 na ihe ịtụnanya ndị ọzọ
Anyị amaghị ma e jidere ngwa ọrụ Apple na ndị na-ebubata ya n'akụkụ. Mana ọ bụ site na ụlọ ọrụ ahụ ka ọ kpọsaa ntinye aka ya na akụrụngwa ọhụrụ na mpaghara ọkachamara nke ndị ahịa ahụ na ndị na-eweta ngwaahịa ahụ arahụla iwepụta ozi ma ọ bụ ngwaahịa na mmepe na n'ọnọdụ kachasị mma atụghị anya ruo 2018.
Agobọchị gara aga, anyị kwuru okwu na kaadị Nvidia ọhụrụ, nke a ga-ahaziri maka iMac Pro ga-ekwe omume yana maka Mac Pro, ma ugbu a (na ohere nke mmụba) na ọdịnihu. N’oge na-adịbeghị anya, anyị gwara anyị etu Intel siri kwalite osiso ọhụrụ a.
Ugbu a ọ bụ oge siri ike draịva. N'okwu a, ụdị Western Digital na-emecha igosipụta mmelite dị ukwuu nke akụrụngwa ya. Ruo izu ole na ole ndị mpụga draịva nwere njikọ zuru ezu site na USB-C, yana njikarịcha nke ọsọ ndị ejiri, maka ọkwa niile. Ugbu a ọ bụ uzo nke Thunderbolt 3 maka ụdị ngwaahịa niile, renamed dị ka ndị a:
G-Drive na Thunderbolt 3
G-Raid na Thunderbolt 3
Ihe oru ohuru a ga - adi gi nma site na ndi okike okike, ma maka ijide ma nyefee ihe ndi enweta na mkpebi di elu.
Ọ bụrụ na ị na-eche mgbanwe ma ọ bụ ịgbasa nchekwa Mac gị, lee ụfọdụ atụmatụ nke G-Drive na Thunderbolt 3: Ọ na-egosipụta ọdụ ụgbọ mmiri TB3 abụọ, ọdụ USB-C, na nkwado USB 3.1. Ugbu a, anyị nwere ike ijikọ ngwaọrụ ise na yinye. Anyị nwere akara HGST Ultrastar na 7200RPM, na-enwe ike iru ọnụego mbufe ruo 245 Mb / s. N'ikpeazụ, a na-etinye nkwado Time Machine dịka na kọmputa ndị gara aga.
Odi na ikike nchekwa ano: 4TB maka $ 399.95, 6TB maka $ 499.95, 8TB maka $ 599.95, na 10TB maka € 699.95. N'oge a, anyị nwekwara ụdị 12 TB ọzọ nke a ga-ahapụ n'oge ụfọdụ na "nkeji iri na ise" na € 799.95
Nhọrọ nke G-Raid na Thunderbolt 3, jikọtara ọdụ ụgbọ mmiri TB3 abụọ, ọdụ USB-C, na ọdụ ụgbọ HDMI na mpụga igbe. Mmepụta a na-enye gị ohere iwepụta vidiyo na 60 fps na ọdịnaya 4K na HDR. Ọ nwere draịva draịvụ 7.200 rpm ma nwee ike ịda ụda nwere ike ruru ngwaọrụ ise ọzọ, yana ịfefe ọsọ na-eru 500 Mb / s
N'ihe banyere ikike, ha na-arịgo: 8 TB na-amalite maka $ 749.95. Nhọrọ 12 TB na-efu € 849.95, 16 TB bụ $ 1,099.95, 20 TB na-akwụ ụgwọ na $ 1,549.95 na elu nke nso bụ 24 TB na $ 1,999.95. Versiondị ọhụrụ a adịghị maka ugbu a, mana a na-atụ anya n'oge na-adịghị anya.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Esi m mac » Apple » ọtụtụ » Western Digital na-atụghị anya ya wulite draịvụ ike ya na Thunderbolt 3 na ihe ịtụnanya ndị ọzọ
Nweta ihe karịrị ndebiri 300 maka ozi ịntanetị gị ihe na-erughị otu euro
iFoto Montage, n'efu maka obere oge